Faraca ugu fiican | Fardaha Noti
Markii aan ka hadlayno taranka ugu fiican, shaki la'aan Carabi inta badan waxay ka mid tahay kuwa ugu cadcad aqoonyahannada faraska. Sidaa darteed layaab ma leh in tartan ka dhasho isweydaarsiga Carabiga oo leh maroodi xoogaa taagan fardooleyda iska caabintiisa weyn, adkaysiga iyo geesinimada, waxaa tixgaliya dadbadan faracyada ugufiican aduunka.
Waxaan ka hadleynaa nooca loo yaqaan 'equines' oo leh magaca Carabiga "Shagya", taas oo ay ugu wacan tahay magaca xero-kicinta abuurtay tarankaas.
Ma dooneysaa inaad wax yar ka ogaato noocaan?
Qarnigii XIX, Waxay rabeen inay gaaraan nooc faras Carab ah oo ku fiicnaa farshaxanka milatariga, shaqada duurka ee gobolka Magyar iyo sidoo kale helitaanka.
Horeba qarnigii hore, boqortooyada Austrian-Hungaria waxay ku bilaabatay xulashada sinnaanta iyada oo ujeedadu tahay in lagu gaaro adkeysi, dheereyn deg deg ah iyo geesinimo fardooleyda ciidankeeda. Baadhitaankan laba arrimood ayaa muhiim ahaa: dhinac dhinac istaaggii reer Bedouin Shagya iyo dhinaca kale, jinsiyadihii hore ee madowga ahaa ee Hungary iyo Transylvania ku abtirsada Tarpan, kuwaas oo ku riyaaqay caan ku ah geesinimadooda, adkaysigooda iyo xawaarahooda.
Shagya ka sokow, saldhigga tartankan cusub ee socday, way dhiseen Bakhaaradii iyo maariintii Carbeed ee bariga laga keenay ee laga keenay Hungary. Kuwani waa isku mid waxay ku gudbeen mareegyada nooca Transylvanian-ka in lagu xushay xirfadahooda wanaagsan ee labbiska, adkeysiga, geesinimada iyo adkaysiga, dhammaan astaamaha muhiimka u ah fardaha fardooleyda ah.
Isgoysku wuxuu ka dhacay beer lagu iibiyo oo uu aasaasay 1789 oo uu aasaasay Major Joseph Csekonics, laguna magacaabo Bábolna. Beertan haraaga ah waxay ku taallay meel u dhow xadka u dhexeeya Austria iyo Slovakia waxaana iska lahaa Royal iyo Imperial Hugría.
Aynu wax yar ka sii hadalno Shagya, waxaa loo tixgeliyey inay tahay ishii ugu muhiimsanayd ee aasaaska tarankan. Waxay ahayd xero Baadiye oo dhererkeedu yahay 160 cm, taas oo laga keenay Hugria oo ka timid Syria 1836 sababo la xiriira xirfadaha taranka iyo astaamaha wanaagsan. Xaqiiqdii waxay ahayd xul ku habboon, tan iyo Markii la arkay natiijooyinka rajada leh ee farcankiisa, waxaa la go'aamiyay in nooca cusubi uu yeelan doono magaca istiraatiijiyadan. Waa run in magaca Carab Shagya uusan aqoonsan doonin Ururka Faraska Adduunka ilaa iyo dabayaaqadii XNUMXs.
Sidan oo kale, marshooyinka ugu wanaagsan ee waddaniga ah waxaa lagula soo tallaabay xarafyada Carabta, iyagoo abuuraya fardo ka adadag iyo ka dhaadheer kuwii Carabtii taasna waxay lahayd astaamo wanaagsan oo kan dambe ah.
Shagya durba waxay noqdeen fardihii saraakiisha ugu jeclaa fardooley iyo caan ka noqoshada adduunka salka ku haysa xirfadihiisa wanaagsan ee fuulista awgeed.
1 Taranka maanta
2 Sifooyinka astaamaha Shagya
3 10 nooc oo kale ah oo lagu aasaasay podium of equine breeds
3.1 Faraska Carabta
3.3 Faras Quarter
3.4 Rinjiga Rinjiga
3.5 Ingiriisi Thoroughbred
3.6 Faraska Andalus
Waqtigan xaadirka ah, tartanka Shagya waxaa lagu dhalaa beero kaladuwan oo kaladuwan, iyada oo tijaabooyinkoodana laga tiro badan yahay Jarmalka, Halkaasoo 1970-kii qaar ka mid ah kuwa wax dhaqda lagu dhiirrigeliyey inay soo bandhigaan faracdan dunida fardaha oo guul weyn laga gaadhay. Tarankeedii Yurub iyo Ameerika ayaa sii fidayay sanadihii la soo dhaafay, kasbashada kuwa raacsan iyo kuwa jecel. Gudaha Isbaanishka wax yar oo soosaara Waxay sidoo kale ku dhiiradeen taranka tarankaan inkasta oo ay yaryihiin tijaabooyin, hadana waa lagu arki karaa wadankeena.
Sifooyinka astaamaha Shagya
Waxay la mid yihiin wax aad u docile iyo sharaf leh, oo leh aragti wanaagsan oo loogu talagalay tartanka sare iyo sida faras madadaalo ah Sidoo kale waa, xayawaan caqli badan kaasoo si dhakhso leh oo fudud u barto tilmaamaha baraha.
Iyada oo dhererkoodu ay u engegayaan inta u dhexeysa 150 cm ilaa 155 cm, waxay leeyihiin a murqaha muruqyada, addimada adag iyo xoogga, kaas oo muujinaya iskutallaab leh sinnaan dhiig leh. Dheeraad ah, wuxuu dhaxlay quruxda bilicsanaanta awoowayaasheed Carbeed, leh sharaf sharaf iyo dhaqdhaqaaq dareere ah. Qurux ahaan waa qadiim carab ah laakiin leh baal weyn.
Dharka ugu badan waa cawl, in kasta oo midabbada astaamaha fardaha Carabta la arki karo.
Waa, sidaas darteed, a equine aad u badan, oo si fiican ula jaan qaada dhammaan howlaha fardaha, laga bilaabo hawlaha toogashada fudud illaa tartan sare.
10 nooc oo kale ah oo lagu aasaasay podium of equine breeds
Sidii aan ku soo sheegnay bilowgii maqaalka, liis kasta oo ka mid ah kuwa ugu fiican adduunka waa inay lahaadaan meel loogu talagalay noocyadan. Waa mid ka mid ah fardaha ugu da'da weyn iyo sidoo kale hiddo-wadaha ayaa laga helaa inta badan noocyada casriga ah fardo fuushan.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato xayawaanadan caqliga badan, ee sameeya xiriir soke oo lala yeesho ninka iyo dabeecad aad u wanaagsan oo loogu doorto waxqabadyo badan oo sinnaan leh, waxaan kugula talineynaa inaad aqriso qoraalkeena: Faraskii Carabta
Noocani wuxuu ka yimaadaa xulashada ay sameeyeen Nez Perce Indians, oo ka mid ah fardaha duurjoogta Mareykanka, raadinta xayawaan buuxin kara filashooyinkaaga ugaarsiga iyo howlaha dagaalka. Waxay doorteen qaar xayawaan aad u adkaysi badan oo safri kara masaafo dheer dhibaato la'aan. Sidoo kale, sharaf leh iyo u istaag khamiiskiisa gaarka ah.
Waxaan kugula talineynaa inaad aqriso Fardaha loo yaqaan 'Appaloosa' iyo jaakaddooda kala soocda leh si aad wax badan uga barato taariikhda noocyadan.
Noocani, oo sidoo kale loo yaqaan Quarter Horse, waa asal ahaan ka yimid USA wuxuuna ku fiicnaaday shaqooyinka gaagaaban 400 mitir meesha ay magaceeda ka timaado. Waa mid ka mid ah noocyada leh tijaabooyinka ugu diiwaan gashan adduunka, sidaa darteed caannimadiisa ayaa muuqata. Waxaas oo dhan waxay ku mahadsan yihiin awooddeeda wanaagsan ee raacitaanka iyo iska caabinteeda weyn ee socodka dheer.
Waxaa laga sheegaa iyaga inay yihiin fardaha lo'da iyo beeraleyda oo ku nool kuna dhinta faraska, waxaa mudan in wax yar laga ogaado iyaga, ma u malayn? Faras Quarter
Tani waxay sidoo kale Waxaa u sabab ah Native Americans, oo ku bilaabay tarankooda iyagoo gudbaya fardaha afarta bilood ee faraska leh dhogorta pinto. Abuuritaanka nooc ka mid ah kalluunka loo yaqaan 'equine' oo aad ugu habboon beeraha ama shaqada xoolaha, roogga iyo fuulitaanka faraska Iyaguna waa aad ugu habboon wadayaasha da'da yar, noqoshada saaxiibtinimo, caqli iyo dadaal shaqo.
Thoroughbreds waa xayawaan si fiican loo saamiyey, xarrago leh si loo eego taas oo ku fiicnaata xawaaraha iyo dhaqdhaqaaqa. Waxay kala yihiin farac ka mid ah seddex carab carabiya kuwaas oo loo soo dhoofin jiray Ingriiska intii u dhaxeysay sanadihii 1683 iyo 1728. Dhammaan fardaha casriga ah ee Thoroughbred waxay ka soo jeedaan safka mid ka mid ah xerooyinkaas. Xayawaankan waxay ku gudbeen mareegta Ingiriisiga iyadoo ujeedadu tahay in lagu gaaro jihada ugu fiican suurtagal ah, taasoo keentay Nooca Faraska Thoroughbred.
Sidoo kale loo yaqaan 'Purebred Spanish', waa mid kale oo ka mid ah fardaha aan laga waayi karin liiska fardaha adduunka ugu fiican. Waxaan nahay ka hor mid kale oo ka mid ah jinsiyadaha ugu da'da weyn, faras Iberiyaan ah oo ah nooca baroque, loo tixgeliyey mid ka mid ah fardaha ugu fiican dagaalka xooggiisa oo sidoo kale ka dhex muuqda quruxdiisa gaar ahaan manfacooda iyo dabadooda.
Noocani wuxuu lahaa a doorka aasaasiga ah ee jinsiyadaha casriga ah labadaba Ameerika iyo Yurub. Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato taariikhdeeda, waxaan kugula talineynaa inaad aqriso: Faraska Andalus
Noocan loo yaqaan 'equine' waa mid ka mid ah fardaha fardaha ugu horreeya ee laga sameeyay Mareykanka sidaas darteedna waxay saameyn ku yeesheen faracyo fara badan oo dalka ku nool sida Faraska Quarter ama Faraska Socodka ee Tennessee. Iyagu waa xayawaan is haysta oo la safeeyey oo leh karti badan, taas oo ka dhigaysa iyaga kuwo ku habboon tiro wanaagsan oo cilmiga ah.
Dabeecaddiisa wanaagsan waxay ka dhigeysaa mid ku habboon fuulitaanka faraska, firaaqada iyo hawlaha qaarkood sida faraska shaqada.
Waxaad wax dheeraad ah ka baran kartaa tan iyo noocyada kale ee Mareykanka halkan: Noocyada ugu waaweyn ee fardaha Mareykanka
Waxaan nahay ka hor mid ka mid ah tartamada ugu muhiimsan marka laga hadlayo boodboodka cilmiga. Waa mid ka mid ah noocyada caadiga ah ee loo xushay labiska. Intaas waxaa sii dheer, waa mid ka mid ah dhacdooyinka isboorti ee ugu guulaha badan, taas oo ka dhigaysa mid runtii caan ah.
Waxay ku saabsan tahay equino quile leh awood boodbood cajiib ah adoo mahadsan xubnihiisa fiican. Intaa waxaa dheer, waxay leeyihiin a dabeecad deggan oo deggen. Ma dooneysaa inaad waxbadan ka ogaato iskudhafyadaas wanaagsan? Waxaan kugula talineynaa: Fardaha Hanoverian, mid ka mid ah noocyada boodboodka ugu weyn
Waa la tixgeliyaa taranka ugu caansan Waa faras aad muhiim ugu ah adduunka isboortiga iyo labiska, taas oo waliba ah waxay soo hooysay guulo badan oo Olambik ah.
Waa xoolo de iska caabin weyn, xoog iyo dareen, oo sumcad ku leh inay noqdaan fardo murugsan. Si kastaba ha noqotee kan fuushan waa xayawaan aad loogu kalsoon yahay.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato iyaga, ha moogaanin: Fardaha Trakehner, astaamaha nooca ugu quruxda badan
Asal ahaan ka soo jeeda gobolka Le Perche, waa a faras adag, xoog leh oo qurux badan. Nooca ayaa sii faafayay wadan walbana noocyo kala duwan oo noocyo ah ayaa ka soo ifbaxayay.
Dagaalkii Labaad ee Adduunka kadib, noocyadu waxay kordhiyeen tirada nuqullada si caan ah. Tani waxay sababtay baahida loo qabo in la raro qalab culus si dib loogu dhiso masiibooyinkii dagaalku keenay.
Waxaad ka heli doontaa maqaal dhameystiran oo ku saabsan isbarbar yaacahan weyn halkan: Faraska Percheron
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » kuwa kale » Fardaha fardaha » Nooca faraska ugu fiican
Jamelgo: macnaheeda iyo adeegsigiisa